Chateau Chambord amin’ny hatsiaka, amin’ny ririnina mangatsiaka ny andro, fa mbola feno olona ao amin’ny fialan-tsasatra sy ny vondrona frantsay tandroka mpilalao. (Ampio aho lahatsary azy ireo taty aoriana.) Izany tao an-trano ny Francois aho, ary ny sasany amin’ny olona ny zavatra Leonardo Da Vinci natao. izany. Ny fomba ofisialy ny boky trailer ho Phil mpifankatia thriller, Ny Voalohany manoloana ny Janus. Ahoana raha misy ny taonjato maro-ela teti-dratsy mba ho azo antoka fa Nostradamus’ faminaniana ny zava-marina. Toy izany ny vondrona dia entiny ny mpitondra, tsy takatry ny saina ny fahefana eo amin’ny famolavolana ny hoavin izao tontolo izao. Ny mpilalao dia mihetsika. Ny drafitra dia ao ny miasa. Ny manaraka ny faminaniana momba ny hanomboka, ary tsy misy afa-tsy olona iray izay afaka hanakana Ny Voalohany manoloana ny Janus. Ny toko Iray ny Mampalahelo vanin-taona mafana ao Biarritz ny mpitantara, Canadian vehivavy, manantena hanova ny fiainany raha mifindra ny Biarritz. Rehefa afa-nandositra ny manimba ny fifandraisana amin’ny ara-tsaina miovaova Dominique, izy dia tapa-kevitra mba hanao namana vaovao izy ary hahita ny tonga lafatra vady. Fa amin’ny fahavaratra ity fialan-tsasatra falehan’ny mpivady sy ny fianakaviana, misy tokan-tena dia irery ny olona, matetika loatra tezitra amin’ny tantaram-pitiavana tsy fahombiazana. Ary raha ny tanora mpanakanto Vinnie nampanantena teny an-toerana ny fiaraha-monina, dia mbola iray saro-takarina olo-malaza. Rehefa Vinnie ny vatana surfaces amin’ny Pointe des Mifantoka vaovao tsaho mivezivezy. Efa tena nisy ny harena hunter, seducer sy blackmailer, na fotsiny ny malemy fanahy, ny-saro-pady ny olona, dia ho resy eo ny fitiavana sy ny finamanana. Ny polisy no namarana ny fahafatesana no nampoizina nefa tsy ny zavatra rehetra hevitra ny famonoana olona. Na dia ny mpitantara ny-mihetsika. Angamba fanirery sy ny fitokana-monina no nanao azy mampiahiahy, noho ny fitiavana dia toy ny tsy miraharaha toy ny hatramin’izay, ary mandrahona ny taratasy avy Dominique dia tonga miaraka amin’ny fitomboan’ny matetika Fampidirana ny Volafotsy Tandroka Ako: Ny Hira ny Roland. Tantara aingam-panahy avy amin’ny Chanson de Roland ary mifototra amin’ny screenplay Hira Roland. Handeha amin’ny teny vola na tsy misy vola, ny telo Maxwell rahavavy’ ny fiainantsika dia ny momba ny fiovana tanteraka. Ankehitriny, iray amin’ny iray, ny tsirairay dia tsy maintsy nirehitra ny lalana ho any am-pifaliana-mandrakizay-rehefa avy. Manderley Maxwell foana ny azo ianteherana, mafy-miasa iray raha ny tanora rahavavy velona A-lisitra fiainantsika, avy amin’ny fianakaviana harena. raha tsy misy very tampoka, namela kamiao ny trosa. Ankehitriny Mandy dia niatrika safidy roa: play mandrakizay mpikarakara azy namabo ny iray tampo, na ny farany hilatsaka azy mialoha fahazarana amin’ny fomba Frantsa. Rehefa Mandy ny lehibeny relocates nandritra ny vanin-taona mafana, Mandy dia tena fotsiny ny varotra ao amin’ny kafe mihazakazaka ho nihazakazaka panompoana amin’ny alalan’ny eny an-dalambe ny fihaonambe iraisampirenena mikasika mandra tsara tarehy, debonair Girard Harena Xavier de Malo marina tohaina azy eny tongony amin’ny famonjena azy tsy hianjera eny amin’ny hantsana. Mandy ny mandeha amin’ny rivotra afa-tsy ny hoe izy no monina any amin’ny chic aloky ny voalohany Madame de Malo marina, feno ny siosion-dresaka momba ny tampoka miafina Xavier ny anjara tamin’ny nanjavonany. Ankoatra izany, dia Ma Handeha amin’ny teny vola na tsy misy vola, ny telo Maxwell rahavavy’ ny fiainantsika dia ny momba ny fiovana tanteraka. Ankehitriny, iray amin’ny iray, ny tsirairay dia tsy maintsy nirehitra ny lalana ho any am-pifaliana-mandrakizay-rehefa avy. Handeha amin’ny teny vola na tsy misy vola, ny telo Maxwell rahavavy’ ny fiainantsika dia ny momba ny fiovana tanteraka. Ankehitriny, iray amin’ny iray, ny tsirairay dia tsy maintsy nirehitra ny lalana ho any am-pifaliana-mandrakizay-rehefa avy. ‘Ny frantsay mpiandry ondry manampy ny fanahy masina’ izao tontolo izao-malaza pop fihetseham-po mandalo eo amin’ny fiainana any ankoatra. ‘Leonora dia fanta-daza ao anatin’ny kely fiompiana tanàna Auvergne ho fanampiana ny matoatoa-nitranga ho amin’ny fiainana any ankoatra. Na izany aza, rehefa izy indray andro niarahaba ‘ny fanahin’ ny vao maty izao tontolo izao-malaza pop fihetseham-po, ny azy izao tontolo izao sy ny fifandonana, mandrakizay manova ny tanàna ny hoavintsika. Raha mieritreritra ny ankizy ny famokarana tao an-tanàna ny fety fanao isan-taona, dia manampy ny mponina, velona sy maty, no tonga teny amin ny tolona, ny rehetra raha nahita ny tenany ny hery ara-panahy ny dikan’ny hoe tia sy ho tia. Ity lahatsary ity previews ny boky ao amin’ny nahazo loka Kely Malahelo TANTARA Mandeha ny ankizy nonfiction sary andiam-boky. Izany koa dia ahitana ny fizarana telon’ny New York City niainany sy ny fandokoana boky izay ahitana ny teny fahendrena avy amin’ny tantara. Nenitoa Lucie dia tena fanaintainana eo amin’ny tendany. Na dia tsy mazava tsara amin’ny olo-masina fony izy mbola velona, amin’izao fotoana izao fa izy no maty, izy mihoatra noho ny tenany amin’ny fanaovana ny fiainana ho fadiranovana ho an’ny fianakaviany. Ny testamenta tahaka ny vato kristaly: mba hanangona ny lova, ny zana-drahalahiny sy ny fianakaviany voatery hifindra tao an-tranony, izay antoka fa tsy ny lapa. Nenitoa Lucie dia iray tsy nampoizina ny sleeve, karazana mad fikarohana harena miafina, dia fehin-lalina ao amin’ny fotaka. Tonga soa eto amin’ny ambanivohitra Frantsa. Ny zavatra azo antoka dia ny hoe ny ry ny zana-drahalahiny dia tsy ho leo raha ireo tratra any amin’ny tsy hay hadinoina adventure ao am-po ny Bearn. Hatraiza no mandeha any izy ireo mba hahazo ny tanana ny jackpot. Mitabataba ny toe-javatra, flavorsome fifanakalozan-kevitra sy miavaka mitodika ny zava-nitranga dia tonga ny fifadian-kanina sy ny tezitra, ny fahaizana mifehy ireo amin’ny alalan’ny fikatsahana ry Nenitoa Lucie. Ny fara tampony ihany no afaka ho mahagaga. Mihoatra noho ny pejy-turner, dia mitaingina bibidia. Angano ny Astraea — Cupid ny zana-Tsipìka dia mihazakaza-dava, ho avy-of-taona lava. Raha tianao ny tantara toy Ny Shandra Tantara, ny mysticism ny Dan Brown tantara, na ny haisoratra legend Faust. YA mpihaino. Kintana.
Mahita Croque-Melpomene amin’ny Instagram Croque-Melpomene ary mitahiry ny dika mitovy ny zava-bitany tantara ity: ‘Raha afaka, ny fomba mety ianao redesign ny fiainana. ‘Sian Evans dia feisty mbola pihetseham-po manalavitra divorcee amin’ny miafina. Rehefa azy hitakemotra mangataka azy io fanontaniana io izy dia mandray izany ho zava-dehibe. Manome ny azy marin-toerana an-trano sy ny asa tany pays de Galles, Sian mandeha irery ny iray hadino zorony ambanivohitra Frantsa mba hanomboka fiainam-baovao ao amin’ny nindramina trano bongony. Misy mihaona ny enigmatic sokitra amin’ny penchant miasa ao amin’ny miboridana. Dia ny hafahafa fihaonana hamorao ny Sian miaiky ny fahamarinana izy nisoroka nandritra ny taona maro? Ary inona no vokany raha izy no
← Mampiaraka toerana alemana vehivavy sy ny lehilahy no mitady ny fiarahana, ny namana, ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanambadiana. Mihaona ny olona avy any Alemaina, Aotrisy, na ny Soisa. Fivoriana Tina sy Andreas
Tsara indrindra amin'ny chat roulette →